Home Wararka Maamulka Koonfur Galbeed oo amray in xoog lagula wareego Dugsi Quraanka lagu...
Maamulka Koonfur Galbeed oo amray in xoog lagula wareego Dugsi Quraanka lagu barto
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay Gobolka Bay, booliska Magaalada Baydhabo ayaa si xoog ah ula wareegay dugsi Quraan oo ku yaalay magalaada Baydhabo. Amar ka soo soo baxay dowlada Koonfur Galbeed ayaana goobtii dugsiga quraan waxay ku badaleen degaan ciidanka Boolis.
Shacabka degan l Xaafada Isha oo ayaa cabasha xoog leh mujiyay kadib markii Booliska magaalada Baydhabo ay amreen in ardayda iyo Macaliminta Quranka in ay baneeyan boos/ama Dhul loo isticmaalayay Dugsi Quran 30kii sano u dambeyay
Dugsigaan ay dowlada xooga kula wareegatay waxaa la furay markii u dalka burbuuray 1991kii, iyadoo loogu talagalay in lagu soo xareeyo, laguna baro Quranka kariimka agoonta iyo caruurta kasoo jeedo qoysaska danyarta, balse waxwalba ayaa is badelay isbuucii nasoo dhaftay markii askar ka amar qaadanayo taliyaha Booliska Magaalada Baydhabo ay gudaha galeen dugsi Quraanka kadibne ay bur buriyeen.
Talabadaan ay qaaday dowlada Koonufr Galbeedn ayaa abuurtay kacdoon waxaana isku dayay in uu soo fargeliyo Cali Sacid Fiqi oo ah Guddomiyaha barlaamanka ee Koonfur Galbeed ahna gacanta midig Cabdiaziz Laftagreen, wuxuuna Cali Sacid yahay kusiimaha madaxweynaha xiliyada oo Laftagreen uu ka maqan yahay degaanka.
Halkaan ka aqariso qoralaka uu Cali Faqi ku amrayo in la joojiyo burbuurinta Dugsiga Quranka.
Previous articleMW Axmad Madoobe oo kulan gaar ah la qaatay G. Doorashooyinka Jubbaland
Next articleCidii ka danbeeysay dil wadareedkii Saaxa-Qurun oo wali la’ogaynin & walwal ka dhashay
[Akhriso] Abshir Bukhaari oo Xeer ilaaliyaha Guud ka dalbaday baarista Askarta...